I-Sensor Tap Ishushu kunye neManzi Cold amhlophe
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Izipompo zeBlue Bath / Isenzi se-Sensor Cofa ushushu namanzi abandayo amhlophe
Kwimeko yangoku yobhubhane, ukuhlamba izandla yenye yeendlela ezifanelekileyo nezisebenzayo zokuthintela. Ukuba izandla azinakuhlanjwa ngokufanelekileyo ngexesha, i-pathogen esezandleni inokungena emzimbeni ngokudibana kwe-mucosal. Ukuhlamba izandla zakho nokuzigcina zicocekile kunganceda ukunciphisa umngcipheko wokufumana i-coronavirus entsha.
Emva kokuhlamba izandla zakho nokucima amanzi, izandla zakho ezicocekileyo zachukumisa isitovu sigcwele iibacteria, sabangela ungcoliseko lwesibini. Isikhuselweyo esincinci somntu sithambekele ekusweleni isifo! Ngeli xesha, wonke umntu kufuneka asebenzise i-faucet yokungenisa
I-SKU: I-EVE-0180-Mhlophe iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Izipompo zeBlue Bath tags: I-Deck Ephakamileyo, Inzwa ye-infrared, I-Mixer Tap, Isikhuseli setyala